Tahriibka: baarlamanka Talyaaniga oo ansixiyey in maraakiib loo diro Liibya | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Tahriibka: baarlamanka Talyaaniga oo ansixiyey in maraakiib loo diro Liibya
Baladweyne(HNN) Baarlamaanka Talyaaniga ayaa ansixiyey qorshe maraakiibta ciidanka loogu dirayo Liibiya si ay uga qayb qaataan dedaalka lagu joojinayo tahriibeyaasha ka tallaaba badda Mediterranean-ka.
Laba ka mid ah maraakiibtaas ayaa hore ba loogu diray, talaabadaas oo ay dawladdu ku sheegtay hawlgal lagaga caawinayo ciidanka ilaalada xeebaha sidii ay u beegsan lahaayeen ma gaffeyaasha.
Talyaanigu waa dalka tirada ugu badan ee dadka tahriibka ah ee biimaha ahi galaan marka ay ka talaabaan badda Liibiya.
Mar sii horaysay ayaa Talyaanigu ka qabtay markab gurmad ah oo Jarmalka laga leeyahay meel u dhaw jasiiradda Lampedusa.
Shaqaalihi saarraa markabkaa oo layidhaa Luventa, oo u shaqayayey hay’adda Jarmalka ah ee Jugend Rettet, ayaa su’aalo boolisku waydiinayaa waxaana amarkaa bixiyey xeer ilaaliyaha Talyaaniga.
Hase yeeshee, hay’adda markabkaasi u shaqaynayey ayaa sheegtay in aan la xidhin markabka ee ay tahay hubin caadi ah oo maamulku wado, waxa se boolisku sheegeen in markabka loo hayo caddaymo muujinaya in uu “fududaynayey socdaal sharci darro ah”.
Isla markii baarlamanka Talyaanigu u codeeyey qorshahan, ayaa doonyo roondo ahi waxay gaadheen badda Liibiya waxa aanay ku sii jeedaan xarunta dalka ee Tripoli.
Wasiirka gaashaan dhigga Talyaaniga, Roberta Pinotti, ayaa ku nuuxnuuxsaday in hawlgalkani aanu noqon doonin “go’doomin” Liibiya la saarayo oo lagu doonayo in aan dooniyiba ka shiraacan xeebaha dalkaas.
Hase ahaatee, kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digaya dadka tahriibka ah hadii lagu celiyo Liibiya ay mudan doonaan jidh dil hadii ay gacanta mar kale u galaan ma gaffeyaasha.